TRANGA TENY SABOTSY NAMEHANA - Mitantara ny havan'ilay lehilahy maty tao amin'ny fonjakelin'ny polisy • L'Express de Madagascar
TRANGA TENY SABOTSY NAMEHANA – Mitantara ny havan’ilay lehilahy maty tao amin’ny fonjakelin’ny polisy
SAMY MANANA NY FANAZAVANY ny NAHAFATY AN’I JEAN KELY NA RAHARISAINA JEAN ROBERT, TAO AMIN’NY FONJAKELIN’NY KAOMISARIAN’NY POLISY TAO SABOTSY NAMEHANA, NA NY FIANAKAVIANY NA NY AVY AMIN’NY POLISIM-PIRENENA. MANAMAFY NY AHIAHY AMIN’NY FOMBA FIASAN’IREO MPITANDRO NY FILAMINANA INDRAY ITY RAHARAHA ITY. MITANTARA NY VOALAZANY FA NIAINANY FARANY NIARAKA TAMIN’ITY NAMOY NY AINY SY NY ZAVA-NISY IREO MPONINA SY NY FIANAKAVIANY.
Niainga tao amin’ny trano fisotroana iray teny amin’ny tsenan’Andranovelona ny zava-nisy, tamin’io talata io, raha ny fitantaran’ireo mponina eny an-toerana. «Niaraka nisotrosotro tao amin’ilay trano fisotroana ireo olona roa nitonona ho polisy sy i Jean Kely. Tsy fantatro anefa izay olana teo amin’izy ireo fa i Jean kely efa nifatotra rojovy no hitako. Niaraka tamin’izy ireo aho nankany Ambohitraina. Efa reraka be i Jean Kely sady nitaraina narary kibo sy te hivoaka saingy tsy navelan’ireo olona nitondra azy», hoy ny fitantaran’ i Jean Paul Razafinanahary, isan’ireo ray aman-dreny to teny eo Andranovelona.
Mponina iray indray no nitantara fa «rehefa nisotrosotro tao amin’ilay trano fisotroana izy ireo dia nanontany ireo olona roa raha mahita rongony i Jean Kely. Ankoatra ny maha mpivaro-kena azy mantsy dia mpanera no fitadiavam-bolany». « Nilaza tamin’izy ireo i Jean kely fa misy any aminy. Vantany vao nampiseho ireo rongony fonosana vitsivitsy anefa izy dia nofatorana rojovy avy hatrany. Hitako fa voafandrika izy teo satria tsy mahalala hoe polisy ireto miresaka aminy. Nanomboka teo koa ny herisetra nihatra taminy», hoy i Heritiana
Andriamampionona, mponina eny Andranovelona.
Tsara ny entana
« I Jean Kely efa nandeha ra teo amin’ny vavany no hitako. Nofafan’ireo olona niaraka taminy tamin’ny mosoara izy, avy eo », hoy indray Radonanahary Rindra, vavolombelona iray hafa nilaza ho nanatri-maso ny zava-nisy ihany koa.
Rehefa nanontaniana momba ny tranga niseho tao amin’ilay trano fisotroana kosa Rajaonarison Roland, mpivarotra tao tamin’io fotoana io dia toy izao ny filazany. «Tonga teto ireo olona roa manao fanamiana sivily nitondra môtô mavomavo. Nividy zava-pisotro tsy misy alikaola izy ireo sady nipetraka teto nisotro izany, tokony tamin’ny 2 ora tolakandro io. Minitra vitsy taorian’izay, tonga i Jean Kely sy olona iray hafa dia nifanao dona tamin’ny tanana izy ireo sady narahin’i Jean kely bitsibitsika izany, tamin’ny iray tamin’ireo roa lahy tonga voalohany, avy eo. Tsy fantatro izay resaka tamin’io. Niteny ny iray tamin’ireo tonga voalohany hoe misy ranom-boankazo io raha hisotro ialahy, miantso an’
i Jean kely. Tsy nisotro izy fa ny entana tsara any aminy no nasesiny», hoy ihany ny tompon’ ity toerana fisotroana.
Nandeha ny fotoana, minitra vitsy taorian’ izay dia nivadika tanteraka ny zava-nisy.
Notohizan-dRajaonarison Roland ny fitantarany: «Nilaza hatrany i Jean kely fa tsara ny entana any aminy ary nasehony mihitsy ireo rongony, nony farany, tao anaty «sac banane». Nitsangana ny iray tamin’ireo roa lahy nividy ilay ranom-boankazo ka nankao aorian’i Jean Kely nahita izany sady nanontany hoe ohatrinona ny vidin’ireo rongony. Ny namany iray kosa naka ireo zava-
mahadomelina sady namofona izany tamin’ny tanany. Namaly i Jean kely tamin’izay hoe 2 000 ariary ny vidin’ireo. Niteny indray ilay avy aoriana nanao hoe andraso àry haka vola any anaty môtô. Kinanjo izy niverina avy any, niaraka tamin’ ny rojovy nafatotr’izy ireo tamin’i Jean kely».
Tsy nifarana teo ny raharaha fa nanomboka ny famotorana nataon’ireo nilaza ho polisy.
Mbola ny mpivarotra tao amin’ity toeram-pisotroana no manohy fa «nankinin’izy roa lahy tamin’ny rindrina i Jean kely, taorian’izay ary nanontanian’izy ireo hoe taiza ireo zava-mahadomelina ireo? Namaly ity voafatotra fa tsy hanoro ny olona tompon’ ireo zava-mahadomelina ireo raha tsy vahana aloha ny rojovy eny amin’ny tanany. Tsy nanaiky izany anefa ireo nitonona fa «polisy». Lasa naka mpianatra aho, tokony tamin’ny 3 ora, fa mbola nijanona teo kosa izy ireo. Rehefa niverina aho, tamin’ ny 4 ora mahery tany ho any, dia efa polisy hafa indray no hitako teo», hoy izy teo am-pamaranana ny fanazavany.
Nentina tany amin’ny toerana voalaza fa nisy ireo rongony i Jean kely, taorian’izay. Teny an-dalana anefa, nisy indray ireo mponina nilaza ho nahita fa « nokasihin-tanana sy notifirina tamin’ny entona manempotra i Jean Kely ». « Hitako sady nitomany izy no mikosoka ny orony, rehefa tratran’ilay entona.
Nilaza ireo nitondra azy hoe koseho fa afaka 30 minitra dia ho torana ingahy. (…) Nisy fotoana nandoa i Jean kely ary nangataka hivoaka fa poritra saingy tsy navelan’ ireo olona nitondra azy», hoy Raherinomenjanahary Vatosoa, mpivarotra legioma, eny Andranovelona.
«Efa hariva ireo olona nitonona ho polisy no tonga tato aminay nanao fisavana ny trano saingy tsy nahita inona. Ny mpiasa iray tato aminay no nalain’izy ireo niaraka taminy, taorian’izay. Tsy nampiseho taratasy fisavana trano avy amin’ny Fitsarana izy ireo fa avy hatrany dia nilaza hoe tonga hisava trano dia tsy sarotiny aho», hoy ny fanazavan’ny lehilahy iray tompon’ny trano nosavaina, taorian’ny fisamborana an’io lehilahy io. Nalahelo sy nivonto fo tanteraka tamin’ity tranga ity ny fianakavian’i Jean Kely indray. «Manaiky izahay fa nahatrarana rongony tany aminy. Saingy na izany aza tsy antony tokony nanaovana herisetra taminy izany. Maninona
izy no tsy natolotra ny Fitsarana dia nogadraina tany Antanimora? Ampahafirin’ny olona nahatrarana rongony amin’ny kilao maro izy, sa ny herisetra no fomban’ny polisy manao famotorana amin’ ny olona samboriny sady tsy manohitra azy ireo akory? Antony mahatonga ny olona tsy hahatoky ny mpitandro ny filaminana ny tranga toy izao raha toa ka tsy misy ny famotorana sy ny fandraisana fepetra hentitra amin’ ireo nanao hadisoana. Vono olona izao natao tamin’ny havanay izao», hoy i Fanjanirina Lalao,
zokin’i Jean Kely vavimatoa.
« Matin’ny hanoanana »
Ny harivan’ny alarobia efa maizina no nentina tany amin’ny kaomisarian’ ny polisy Sabotsy Namehana i Jean kely sy Razafinanahary Jean Paul. « Teny an-dalana dia menatra aho satria nampiakarina taorian’ny fiaran’ny polisy toy ireny jiolahy mahery vaika irony, kanefa mba raiamandreny eto an-tànana ny tena. Mbola nitaraina narary kibo i Jean Kely teny an-dalana, tamin’io. Teo Ankadikely aho vao nampidirin’ireo polisy tao anaty fiara », hoy ihany Razafinanahary Jean Paul. Tokony tamin’ny 9 ora alina izy ireo vao tonga teny amin’ny kaomisaria. Nanomboka teo dia naiditra trano mihiboka na fonjakely i Jean Kely.
Na ny Contrôleur général Rajaobelina Joachim, Tale jeneralin’ny Polisim-pirenena na ireo polisy eny amin’ny kaomisaria Sabotsy Namehana, izay nandehanany teny an-toerana, dia samy nanilika ny fanazavana momba ity raharaha ity any amin’ny sampan-draharaha misahana ny serasera na Sicri eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka avokoa.
«Rehefa nifampiresaka tamin’ny kaomiseran’ny Sabotsy Namehana aho dia toy izao ny fanazavany nomena ahy: voasambotra nandritra ny asan’ny polisy, ny alin’ny talata, tamin’ny lalana mankany Andranovelona io lehilahy io ka rehefa nosavaina dia nahatrarana rongony tany aminy sady mamo izy.
Andeha hofotorana izy, ny alarobia, no nitaraina ho poritra ka narahina rehefa nanao ny filàny. Taorian’ izay dia nitaraina ho fanina ary nitambotsotra nianjera izy. Nentin’ireo polisy naka rivotra teo ivelan’ny birao izy ka tamin’izany no tsikaritr’izy ireo fa tsy mihetsika dia niantsoana dokotera tao amin’ny toby fitsaboana fototra eo Sabotsy Namehana ihany, saingy tsy tao ilay dokotera. Nentina teny amin’ny hôpitaly Anosiavaratra, taorian’izay, ka ny dokotera tao no nilaza fa tsy tana ny ainy ary vokatry ny hanoanana no nahafaty azy», hoy ny fanazavan’ny Kaomisera Ranaivoson Alexandre, lehiben’ny Sicri.
Nandà izany anefa ireo fianakaviana, rehefa nanontaniana momba izany filazana izany. «Olona matanjaka be i Jean Kely satria mpivaro-kena no asany. Indraindray aza manao mpibata entana any Andravoahangy izy. Tsy antony nahafaty azy mihitsy raha tsy fahitana sakafo ao anatin’ny iray alina monja», hoy indray i Fanjanirina Lalao.
Kamboty roa vavy
Nisy olona tonga teny amin’ ny kaomisaria, ny alarobia maraina, hanatitra sakafo ho azy. Nambaran’ny polisy tao fa any amin’ny Hjra izy. Io olona io, nony avy eo, no nampandre ireo havany .
« Rehefa tonga teo amin’ ny kaomisaria ireo havan’i Jean Kely dia ny fiaran’ny polisy no nitondra azy ireo tany amin’ny Hjra. Rehefa nahita ny razana izy ireo ka nilaza fa hitory dia mbola ny fiaran’ ny polisy ihany no nitondra azy ireo nankany amin’ny polisy misahana ny heloka bevava izay hanaovan’izy ireo fitoriana, araka ny filazany tamin’ny lehiben’ny polisy eny Sabotsy Namehana ihany», hoy ihany fanampim-panazavan’ny kaomisera Ranaivoson Alexandre.
Mbola nolavin’ny fianakavian’ity lehilahy namoy ny ainy ity ihany koa anefa io filazan’ny polisy io.
«Raha tonga teny Sabotsy Namehana izahay, ny alarobia maraina, dia tsy nety nilaza mihitsy ireo polisy na maty na velona ny havanay fa valin-teny boribory nataon’izy ireo ny hoe mandehana mankeny amin’ ny Hjra dia any ianareo mahita azy. Tsy nisy velively kosa izany fametrahana fitoriana teny amin’ny polisy misahana ny heloka bevava izany. Mbola am-bohitra izao ny razana dia sahirana mikarakara izahay fa tsy mbola afaka nanao fitoriana», hoy ny zokin’i Jean Kely.
Rehefa hitan’ireo fianakaviana ny vatana
mangatsiakany dia nisy ireo latsa-dranomaso. Tao koa ireo tezitra mafy. «Ny tarehiny mangana, ny lamosiny misy marika mavomavo tsy fantatra hoe naninona. Nodorana ve izy sa natao inona?», hoy Rakotoarisoa Etienne, dadafaran’ny maty.
Ny vadiny indray, Rameliarison Angeline dia saika tsy nahaloa-peo teo am-pitantarana ny zavatra niainany. «Tamin’io talata io, avy niasa aho tonga tato an-trano no naheno ny zava-nisy. Tsy afa-nanao inona intsony anefa satria alina ny andro. Vao maraina, ny alarobia, dia nandeha tany Ankadikely aho nijery azy saingy tsy tany izy. Hany heriko dia nandeha tany am-piasana saika hiera tsy hiasa. Mbola tany am-piasana anefa aho no tonga ny filazana hoe modia fa maty
i Jean Kely. Tonga tany amin’ny hôpitaly izahay dia razana miboridana no hitanay tao. Tsy hita ny akanjony. Natao tsinontsinona ilay olona na dia efa namoy ny ainy aza», hoy izy sady latsaka ny ranomasony. 17 taona izay no nivadian’i Jean Kely sy Rameliarison Angeline ary niteraka mirahavavy izy ireo.
Rehefa nanontaniana momba izany rehetra izany ny teo anivon’ny Polisim-pirenena dia tsy nanamarina na nandiso ny zavatra notantarain’ireo fianakaviana.
Hoy fotsiny ny kaomisera Ranaivoson Alexandre hoe: «nilaza ny hametraka fitoriana ireo fianakaviany, ka aleo ny valin’ny famotorana no andrasana». Tsy fantatra kosa anefa na hisy na tsia ny fanadihadiana hafa ataon’ny Inspektora jeneralin’ny polisim-pirenena, rafitra iray mpanao fanadihadiana amin’ny fomba fiasan’ny polisy tsirairay eo anivon’ny minisiteran’ ny Filaminam-bahoaka, momba ity raharaha ity. Ho hita eo ny tohiny fa zava-misy eto an-drenivohitra avokoa izany. Ody varatr’ilay mompera e!
Vindictes populaires – La CNIDH sort de ses gonds